Reer Habel oo ka soo jeeda reer Awdal ayaa xisbiga Kulmiye amma Waddani la gelaya heshiis. Reerkaasi waa reerkee? ( Adaa runta arkiye akhri maqaalkan ) | Awdalpress.com
Reer Habel oo ka soo jeeda reer Awdal ayaa xisbiga Kulmiye amma Waddani la gelaya heshiis. Reerkaasi waa reerkee? ( Adaa runta arkiye akhri maqaalkan )
Waxa Daabacay staff-reporter on Aug 10th, 2017 and filed under Daily Somali News. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.
Shacabka reer Awdal oo weligiiba mid ahaa, isla markaana aan qabyaalad aqoon, dantoodu ay mid ahayd, ayaa waxa sannaddadan lagu guulaystay in la fur furo oo la qaybiyo, reer reer loo tartansiiyo, reer reer loo collaysiiyo, oo maanta la gaadhay in bulshadii la kala qoqobo.
Waxad maqlaysaa Habar Cafaan ayaa xisbi hebel la macaashaysa, Madax Case ayaa siyaasi hebel kontaynar ku xidhay oo kursiga hebel ilaalinaysa, Makaahiil ayaa samaystay ciidan cusub oo sidii RRU da ah, oo la yidhaa MG group isaga xoraynaya reeraha is bahaystay iyo wax la mid ah. Inkasta oo ay jiraan muddakar badan oo reer walba leh, oo arrimahaa socda ka yaabban, laakiin laga badan yahay, oo aan waxba ka qaban karin masiibada dadkii ku habsatay.
Somaliland waxa la og yahay in uu ka jiro tartan siyaasad xumo lagu hoggaaminayo iyo dagaal rag u dhexeeya oo saamayn ku yeeshay gobollada Somaliland. Gobol walbana waxa shacabkiisii lagu yahay duullaan ay hororro u soo tafa xayteen. Xataa qurbihii ayaa shacabkii reer Somaliland la kala ootay, oo loogu kala abtirinayaa kaasi ama reer hebel waa Kulmiye, maahee waa Waddani, maahee waa Somaliweyn iwm. Shacabkaasi la kala qoqobtayse waxa ugu liita dadka ka soo jeeda gobollada galbeedka gaar ahaan Awdal.
Dadku miyaanay ogayn in xukuumadda Somaliland ay ku dhisan tahay habka loo yaqaan presidential system of government oo micnaheedu tahay Awoodda waxa iska leh Madaxweynaha, isaga ayeyna wax walliba ka go’aan, haddii ay tahay wasiirrada uu dhisayo amma madaxda laamaha dawladda ee uu magacaabayo iyo mashaariicda horumarineed ee gobollada loo qaybinayo. Sida taariikhdu inna baraysana, waxa ay xukuumad wal oo Somaliland ka soo dhisantay aan ku soo aragnay, in saamiga reer Awdal ay dawlad walba ku lahaayeen si isku mid ah, tusaale ahaan haddii aan soo qaadno oo balaayo af lagama dhawree reeraha la innoo qaybiyey iyo sida wax loo siiyo wax ka sheegno, waxan aragnaa in Habar Cafaan ( Hal Wasiir iyo agaasime guud ), Maxad Case ( Hal M/xigeen iyo hal wasiir ), Jibril Yonis ( Hal Wasiir, Wasiir ku xigeen iyo Maareeye ), Reer Nuur ( Hal Wasiir iyo xisaabiye guud ) oo ay wasiirradu yihiin kuwa ugu liita sida Wasaaradda xidhiidhka golayaasha, wasaaradda shaqada iyo wax la mid ah.
Sidaasi daraaddeed, waxa aan shaki ku jirin in dawladda danbe ee iman doontaa ay raaci doonto shaxdaa, Madaxweyne xigeenka yimaaddaana aanu waxba ka beddeli doonin. Haddiise inta goori goor tahay, ee aanay doorashadu dhicin dood adag laga geli waayo saamiga gobolku uu yeelan doono dawladda u dhismi doonta Somaliland, ha u fadhiyin in aad reer reer hoose wax ku heshaan ama saamiga gobollada galbeedku is beddelaan.
Adigoo halkaa yaal ama xaalkaagu sidaa yahay, maxaad odayow ama siyaasiyoow da’yartaada u qaybinaysaan? ee aad reer hebel baad tahay, kaasina waa reer hebel ugu kala sheegaysaan. Waxa nasiib darro ah sida marwooyinkii quruxda badnaa, ilbaxa ahaa, ee is jeclaa, ee reer Awdal ay maanta ugu kala jiraan xerooyin kala wada midab ah, ee aanay isku arki karin, koox walbaana ay murugoonayso…..illayn farxaddii waxa ay raacday wada jirkiiye….. Sawirka noocaasi ah miyaan sii eegannaa, mise inta goori goor tahay ayaan dib u jeedso nidhaahnaa.
Gaba gabadii waxan ogahay in ay reer Awdal iyo gobollada galbeedkuba nasiib badan yihiin, oo ay horeba uga soo badbaadeen dabinno iyo dhibaatooyin loo soo maleegay….. muddakarkiisa iyo wiilkooda ama gabadhooda loo soo adeegsaday….. maantana waxan aamminsanahay in ay tani uga bixi doonaan sida ugu dhakhso badan. Doorashadan lagu dawakhiyeyna, waxa ay kaga gudbi doonaan midnimo iyo caafimaad.
Reer kelidii heshiis xisbi la geli karaa ma jiro….mana jirayo, laakiin midnimo ay reer Awdal codkooda wax ku helaan way leeyihiin. Dadka hoggaanka sheeganayaana waa in ay taasi fahmaan. Inta wax qorta ee aan ka mid ahayna waxa looga baahan yahay in ay midnimada dadkooda isu taagaan. Wixii ay danbi geleenna ka ISTAAQRULAYSTAAN.
Midnimo iyo guul ayaan dadkayga u rajaynayaa….meesha aad codkiinna siin doontaanna wada jir ayaan isula eegaynaa…